“နင့်ကို ငါချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ဆိုထားတဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေး – ရှအေလငျး
“နင့်ကို ငါချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ဆိုထားတဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သီချင်းလေး
“နင့်ကို ငါချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ဘာသာစကားမျိုးစုံ နှင့် သီချင်းလုပ်ဆိုလိုက်တဲ့ အခါ အရမ်းကို ချစ်ဖို့ကောင်းသွားရော
အတီးကလည်း ကောင်း အဆိုကလည်း စကားသံ ၀ဲဝဲလေးနဲ့ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်နော်
သင်ရော ဘာလူမျိုးကို ချစ်မိနေလဲ . .သူ့ဘာသာစကားနဲ့ . . .ချစ်ခွင့်ပန်ဖို့ မတတ်သေးဘူးဆိုရင် ဒီသီချင်းလေးထဲကနေ သင်သွားပါနော်
သီချင်း Video ကြည့်ရန်
“နငျ့ကို ငါခဈြတယျ” ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ဘာသာစကားမြိုးစုံ နှငျ့ သီခငျြးလုပျဆိုလိုကျတဲ့ အခါ အရမျးကို ခဈြဖို့ကောငျးသှားရော
အတီးကလညျး ကောငျး အဆိုကလညျး စကားသံ ဝဲဝဲလေးနဲ့ အရမျးခဈြဖို့ကောငျးပါတယျနျော
သငျရော ဘာလူမြိုးကို ခဈြမိနလေဲ . .သူ့ဘာသာစကားနဲ့ . . .ခဈြခှငျ့ပနျဖို့ မတတျသေးဘူးဆိုရငျ ဒီသီခငျြးလေးထဲကနေ သငျသှားပါနျော
သီခငျြး Video ကွညျ့ရနျ
လူဆိုးလူမိုက်ကြီးကို ချစ်လို့ရအောင် ယူထားတာဆိုတဲ့ မအေးသောင်းရဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းအပေါ် အချွဲပိုနေတဲ့ ကြည်နူးစရာဗီဒီယိုဖိုင်လေး
ဆွေခန်းမျိုးခန်းဖြတ်ပေးဖို့ မိသားစုဝင်တွေကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အလှမယ် သင်းသင်း
စုံတွဲလိုက် ပျော်ပျော်ကြီး ခရီးတွေထွက်နေကြတဲ့ သူတို့စုံတွဲလေးတွေရဲ့ ပျော်ရွှင်အားကျစရာ ဗီဒီယိုလေးတွေ
ထိုင်းထီပထမဆု ဘတ်သိန်း(60) ဆုကြီး မြန်မာ လုပ်သားဇနီးမောင်နှံပေါက်ပြန်ပြီ
နယ်ကျော်လာတဲ့ တရုတ်ငါးဖမ်းရေယာဉ်ကို အင်ဒိုနီးရှား ပစ်ခက်နှစ်မြုပ်
“မန်း ၀န်ကြီးချုပ် ..ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့ ..လူ ၆၀၀၀ ကျော်ပါဝင်တဲ့...